July 2015 – Ministry of Education in Puntland
July 25, 2015 / News
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo biloowday sixitaankii imtixaamadka Fasaladda 8aad.
25/julay/2015 ,Xarunta Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland magaalada Garoowe ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayey sixitaankii imtixaamadka kama danbaysta ee Fasaladda 8aad Shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka […]
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo U soo xirtay Tabababar 270 macalin oo kala yimi Dugsiyadda sare ee Puntland.
06/julay/2015- kuliyadda tababarka ee Macalimiinta Puntland ee GTEC ayaa waxaa ku soo xiramay Tababar soconayey mudo bil ah oo ka faaiidaysatay 270 Macalin oo dhiga dugsiyada sare ee Puntland. Tababarka […]
Wasaradda Waxbarashada iyo Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Puntland oo ku dhawaaqday natiijada Imtixiaanka Shihaadiga ah
05/julay/2015-Wasarada waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa maanta oo Sabti ku dhawaaqday Natiijada Imtixaanaadka Shihaadiga ah ee 2014/2015 ka dib munaasibad lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaradda. Kulankan […]
Wasaaradda waxbarashada oo Daahfurtay Qorista manhajka waxbarashada Dugsiyada Hoose/Dhexe
04/julay/2015-Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa maanta daahfurtay qorista manhajka waxbarashada Dugsiyada Hoose Dhexe ee goboladda Puntland, Waxaa wasaaradda ka caawinaya qorista manhajkan hay’ada AET (Africa Education Trust). Daahfurka waxaa ka qayb […]